Wacyiga Todobaadka: Boqorro-kooxeedyadii Muslimiinta ee Andalus iyo Soomaalida Maanta « HiilDan.Com
Home › Warka (News) › Wacyiga Todobaadka: Boqorro-kooxeedyadii Muslimiinta ee Andalus iyo Soomaalida Maanta
Wacyiga Todobaadka: Boqorro-kooxeedyadii Muslimiinta ee Andalus iyo Soomaalida Maanta By hiildan on March 26, 2012	• ( 68 )
Dagaaladaa iyo tartanadaa muslimiinta dhexdooda ee loo adeegsaday qabyaalada, kooxaysiga iyo xukun-jecaylku wuxuumuslimiintii ku abuuray tafaraaruq iyo itaal-darri keenty in Cabaasiyiintii ciraaq ay tirtiraan Mongooliyiintii, umawiyiintii Andalusna ay u kala burburto boqorro-kooxeedyo ay boqol iyo kontonkii killomitirba (every 150 km) yelelato boqor ka taliya oo cadaw ku ah boqorka kale ee muslimka ah ay is xigaan oo midba midka kale u adeegsado gaalada (sida maanta dad soomaali ahi u adeegsadaan xabashi ama kiiniyaati si uu uga adkaadaan Soomali kale!); taasi oo aakhirkii sababtay in ay iyagii is tirtireen oo dhulkii lagala wareega. Illaa la arkay boqoradii qaarkood oo ilmaynaya khasaarihi iyo jabkii ku dhacay awgeed! Sida laga wariyey hadal hal-hayn ah oo ku timid nin boqor Andalus ka ahaa oo ay hooyadii aragtay isaga oo ilmaynaya ka dibna ay ku tidhi erayo murti noqday oo ah: “xukunka aad sidii ragga u ilaashan weyday… sidii dumarka ugu ooy!”
Share this:ShareFacebookTwitterGoogle +1PrintEmailLinkedInLike this:Like Loading...« Ku Nasta Heestii ‘Dhooleey’ Iyo Cabdoo Xamar Qoodh(AUN)Eng Cumar Shimbir Iyo Suldaan Samatar Oo Ka Tacsiyeeyay Geeridii Marxuum Cabdilaahi Yuusuf(AUN) »Categories: Warka (News)	Related Articles
Mr. Siilaanyo Thank You and Congratulations but Never Surrender Our Sovereignty	Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo Marti Qaaday Ugaaska Beelaha Gadabuursi.	Hodan C/Raxmaan Dheere, Waa Fanaanad Qaran, Oo Ay Dhaleen Fannaaniin Qaran: Maxaa Ku Jaban Hadday Ka Qayb Gasho Xuska 18-ka May?	Todobaadkan Iyo Sheekadii Ugu Hadal Haynta Badnayd UK: Dr Siilaayo, Xirsi, Dr Maxamad vs Jaalliyada Awdal UK	Maanta Waa Maalin Khayr Badan: Soo Dhawoow Ugaas C/Rashiid	Professor Axmad Ismaaciil Samatar: CANARY IN THE COAL MINE (Somalia)	68 replies	»
hiildan	March 26, 2012 • 13:28	Very well done professor Omar, waa qormo xusid mudan iyo taariikh xiisa badan. Sida ad kusoo gunaanadayna waa dardaaran la xusuunaan doono. Waxan rajaynayaa in Soomaali wax haku qaadan doonto.
Reply ↓	Timacade	March 26, 2012 • 16:39	Thank You Omar. Dhibta Somali haysataa walaal waxa weeyi dad badan oo vision siyaasadeed lehi kuma jiraan. Siyaasiyiinta somalida badankoodu waa nin nolol malmeedkissa la kadeedan oo kale, waxayna mashquul ku yihiin siday siyaasad malintaa jirta uga dabaalan lahyeen oo ku kalifta inay ka fikiraan uun ” shor cuts” ay ku gaadhaan ” limited political goal”. Labaatan Sano Somalia, waxa la isku dayey in la dhiso, dawlad u eg dawladii ugu dambaysay ee siyaad barre, oo ay siyaasiyiinta badankoodau u haysteen inay yaqaneen sida loo ” survive” garooba. Lakiin runtii cidina kama fikirto wax sustainable ah oo iyaga dabadood sii jiri karta. Xisbiga Hiilqaran waxuu isku dayayaa inuu dhiso, maaha wax Ina Samater iyo kooxda la socotaa u aydo ee waa waxa ka dambeeya iyaga oo waara oo somalia ka saara dhibta ragaadsatay ee ay ku jirto. Dadka badankoodu waxay leeyihiin waar meesha qabyaalad baa ragaasatay oo waxba u socon mayaan, lakiin dee qabyaaladu waa ” Social Construct” ee ilaahay ma samaynin. Ilaahay waxu yidhi uu “We made you Qabaaila wa Shucuuba” , lakiinn muu odhan waxan idinka dhignay qabiiliistayaal iyo shucuub. Markaa mar hadii ay tahay qabyaaladu social construct uu dad sameeyey, waxan qabaa inay dad wagarad ahi baabin karaan effectka ay ku leedahay siyaasada somalida. Hadda dawlad goboleedyada qabyaalada ku dhisanana maaha waxay somali samaystay ee waa product of ” Dual track Policy” ay western worldku kula dhaqmaysay somalia sanaadihii u dambeeyey oo ku kaliftay somalida inuu nin waliba saxni yar oo wax loogu rido meel dhigto.
Hiilqaran waxay isku dayaysaa inay abuurto, siyaasad Somaliyeed oo ku dhisan, waxayaabaha nativeka ku ah somalia oo ay ka mid yihiin, muslinimo, not plitical islam, Somalinimo, not dawlad goboleedyo, wadaninimo, not selfish politiking.
Hiilqaran, Superior politics for Somali’s by Somalis…….please join @ http://www.hiilqaran.org.
Walee aniguna waanigaa wadaadkii aan ceebla ku eedaynayey noqday……kkkkkkkk
Reply ↓	Omar	March 26, 2012 • 17:18	Timacadow, waa runtaa oo qabiil ceeb maaha ee waa qabyaaladda waxa halkaa inna dhiggay, rajjadda aan qabnaana, waxay ila tahay, waa dhallinyarada oo ka xorrowda fikirka ku wajahan in qabiil laysku qiimeeyo, wax lagu qaybsado, laysku aamino, laysku amaano, laysku doorto oo laysku caayo! Rajaduna weli way nooshaha, sidaan qabo. “there is a light at the end of the tunnel”
Haddiise dhalinyaradu (iyagoo da’weynta nadiifta ah adeegsanaya) ay kaalintoodaa muhiimka ah ka soo bixi waydo, oo ay ku dhex milmaan siyaasadaha qabyaaladaysan ee, in badan oo ka mid ah da’weynta soomaaliyeed ay waqtiyaddan u adeegsadaan nolol maalmeedkooda gaaban, waxa imanaysa taariikhda oo doorkeedii qaadata, sida kor u cad!!
Reply ↓	HaniMuufo	March 26, 2012 • 17:19	Salaan sare dhamaan,
Horta tariiqda Islamka europa qabsaday. Aad ayaan u xiisayaa waxana ii soo baxday in Gumeeste yaashi Carbeed aay wateen dad African ah oo dagaalka u geli jiray. Hadaba waxa aan aad ula yaabay. Maamul xumada Carabta ilaa iyo hada madaama aay na bareen dhaqankooda guracan, kolayba meel ma tagayno oo waan kugu raacsanahay in aan wadadii hayno. Ilaa iyo hada wadamada dunida ugu qanisani waa Saudi iyo Emarat of Arab!
Dadka hoos yimaadana ee shaqo u soo raadsada sidan ayeey u galaan!
Waxaan is waydiiye ma anaa walan mase cadan baa laga tumayaa!.
Maxaa umada Islamka shegataahi u naxariis darantahay hadii xukun la yiraahdo?
Maxayse ugu takri falaan hadii hibo ilaheey siiyo?
Ma diintaa af maldahe ka ah mase wax wayn oo la inoo sheegin baa jira?
Reply ↓	Omar	March 26, 2012 • 19:37	Waan idin wada slaamay,
Bal ila dhagaysta heestan wadaniga ah ee “Soomaalay is garawso”:
Reply ↓	Marunbaa	March 26, 2012 • 21:52	Hit the nail on the head. Sidaan maqlay carabi fidinta diiinta islaam ka luuqada oo kaliya ayay kaga qayb gashay laakiin cududa iyo aqliga inta badan waxa lahaa Farasiyiinta iyo dadkii aan carabta ahayn. Taariikh da carabtu uma baahna in meel fog laga raadsho waase xaqiiqo soo noqnoqata midiba miday ka danbaysana run ka sheegta waana ta maanta aduunka muslim ka maanta hortaala.
Reply ↓	HaniMuufo	March 26, 2012 • 22:04	Marunbaa,
Adiga jaamici aan kuula baxay. Ilahoow waxaa tiri hadaan hal ka fahmay warka noo jilci nin yohow!.
Reply ↓	Marunbaa	March 26, 2012 • 22:06	Hanimuufo, suuqii ugu waynaa ee adoonsiga dadka aan carabta ahayn la gayn jiray wuxuu ahaa Makah oo ilaa taariikh da maanta lagu gumaysto dumarka ha u badnaadaan aduun yada sadexaade. Waa run jirta jiri jirtayna laakiin ilaah laba sobobood oo asturuu siiyay, xaruntii diinta islaam ka iyo shidaal duni oo dhani u baahan tahay. Isku day inaad akhrido buug la yidhaa, Traveling through Southern Abyssinia in Adal Country waxanad raadisaa pages ka hadlaya sida safarka Makah usii jeedaa u ugaadhsan jiray gabdhaha yaryar si ay u iib geeyaan. Lasocoo ficil kaas xumi wuxuu soo gaadhay ilaa 1920 intii aanu suuq madaw isku badalin. Ta maanta taagana adaa ba soo galiyey meesha. Hanimuudoo, haa wax yaalo badan oon la inoo sheegin baa jira.
Reply ↓	HaniMuufo	March 26, 2012 • 22:29	Mahadsanid Marunbaa,
Horta aniga aqoon badan ma lihi laakin whistleblower and resorcefull ayaan ahay laakin madaama dad badan afka i goostaan markaan runta sheego in aan walanahay iyo in cadan laga tumayo ayaan kala garan waaye. kkkkkkkkkkkk
Laakin google dad badan aan ka helay oo aqoono kala duwan leh hadana aan isku fikrad nahay.
Reply ↓	Timacade	March 26, 2012 • 22:47	Marunbaa……..Miyaad maqashay waligaa discussion xajka ah iyo inuu jiro exceptions cida uu ku waajibo. Waan fahamsanahay in la yidhi ” xajka gudo haddi aad karayso” lakiin somalida Famineka hayso miyey karayaan. Aniga meesha aaan joogo xajku waxuu qaataa $8,000 ilaa as much as $15,000. Siduu ilaahay u arki hadii aan idhaahdo, lacagtii aan xajka ku tegi lahaa, waxan ku quudiyey, 5000 oo qof oo muslimiin ah oo gaajo u dhimannaya. Siduu qof Somali ah oo og inay Somalia famineka jirtaa $8,000.00 dollar ugu kharash garyn karaa inuu ku tego xajka. Hadaan dambaabay ilaahay dambigayga ha dhaafo.
Reply ↓	abdallahi32	March 27, 2012 • 00:01	Timacade kkkkkkk
adiga oo garanaya inaad dambaabtey ayaad hadana leedahay hadaan……
sxb xajku waa waajib ee waxa u kamid yahay 5ta arkaan ee islaamka….. markasi hadalkaagu waxa u noqonaya adiga oo yidhi sida tan” hadii aan salaad tukan waayo, ambase soomi waayo oo aan quudiyo masaakinta ma dambiba??
masaakinta dhimanaaya oo aad quudisa waa sunee ee farad mahine xajka oo aad gudataana waa farad oo waa lagu weydinii hadii aad lacagtiisi haysid
Reply ↓	HaniMuufo	March 27, 2012 • 04:39	abdallahi32,
Adeer waan is yeel yelaa oo waligay ma jecli in aan iraahdo waan daadshay oo marwalba dad kaa sii garaad wayn unbaa la heli. Waligayna ma maqal xaj lagu qasbanyahay. Waxaan maqlay in horta dariskaagoo baahan aadanba xajku waajib kugu ahayn. Aniga xajka waxaan gayn lahaa waxaan siiyaa umada ku tabalaysan Somalia madaama aan ka dheregsanahay kabta lacagtaydu mari doonto. Waayo waad u jedaa marka carabku dhergo in uu slave master isku bedelayo. Waliba xataa markaan arko campanio caawiyo ubadka zuid americanka ah ee tabalaysan ama africanka gaalada ah. Bil walba 2 dollar ayaan siiyaa. Sida Haiti. Waxaana aminsanahay in aan ajar iyo xasanaad ka helayo.
Reply ↓	cumar	March 27, 2012 • 00:21	Salaam Calaykum waraxmatulaah,bishaaro bishaaro waxa saxaafada gobolka awdal salal iyo gibilay ku soo biiray web side cusub oo noqondoona muraayada quwmiyada samaroon meelkastuu joogo,webkan waxa ka qayb qaadan doona filim sameeye oo aad looga danbeeyo video yada Hassan Ashkir iyo qoraaga wayn ee Maxamed muuse,iyo xuseen timo cade.
markii la arkay baahida loo qabo warbaahin casri ah oo gudbisa mawqifka umada.waa..www.GerisaNews.com
Reply ↓	Timacade	March 27, 2012 • 00:29	Abdillahi……..Rukunkani exception buu leeyahay odhanaya haddi aad karayso. Waayahay, haddii aan karayoo lakiin uu qof muslim ah oo weliba Somalia ah aan lacagtaa aan haysto aan ku badbaadin karo, ma waxad leedahay, xajka ayaa priority ah. Waxa kaliya ee aan raadinayey diinta islaamku exceptions badan bay samaysaa, sida haddii ay gaajo ku dimanayso inaad cuni karto khansiir, iwm. Markaa exception sidaasi oo kale ah miyuu leeyahay xajku , waliba umaddaha ay famine ku rafaadisay, uun weeyi su’aashaydu. Waan fahamsanahay inuu red line jiro oo ay dadku ka cabsoodaan su’aalaha caykan ah, lakiin dee anigu aqoontayda diinta islaamku ma badna, markaa hadaa wax su’aal aqoontayda wax kusoo kordhisa aan dadka weydiiyo, waan hubaa inuu ilaahay ii dambi dhaafayo hadii aan dambaabay. Situationka somalia maaha caadi, tens of thousands oo somali ah ayaa gaaja u dhimanaya, markaa qofka go’aansada inuu lacagta uu xajku ku tegi lahaa uu gabigeedba ku kaalmeeyo inay quutaan dad masaakiin ahi, waa maxay sabata aan loogu xisaabinayni, ilayn diinteena maaha ” dogma” uune caqli iyo sabab bay ujirtaaye. Sidoo kale haddii aad dhakhtar tahay oo aad qof badbaadinayso, dee salaada waa qalayn kartaa, oo ma odhanaysid qofkani ha iska dhinto, salaadiibaa la gaadhaye.
Waadse mahadsantahy jawaabtaada.
Reply ↓	abdallahi32	March 27, 2012 • 02:19	haa koley su’alaha badan ee wax micno ku jirin ayey dintu mamnuucdey balse la dagaalanka jahligana diinteenu wey waajibisey oo inad wax barata oo diinta barataa waaba waajib.
Hadii aan uso noqdo su’aasha xajka sxbow exeception xajku waa “if u can”…. so hadiii aad lacagteedi heeshid oo aad haysid wakhtiga xajku joogo dee inaderow waa kugu waajib.
Keliya waxa ku banaan ambase exception uu noqoneysa the first exception( if u can tii hore) waa guurka.
Taasi waxan kawada hadii aad lacaagti xaajka haysatid oo wakhtigii xaajka la joogo oo damac guurna kugu jiro markaasi waxa horeenaya guurka oo xajka dib ayad u dhigeysa.
Anigu koley exception ka guurka unban maqley ee hadii aad miskiin naftu ka baxeyso ku quudiso xaasanad keegi waad leedahay balse ogow xajka waa laga sugaya uun oo waa inaad intaad nooshahay mar uun soo gudata xajka.
Reply ↓	ceebla	March 27, 2012 • 01:37	aad ayuu u mahadsanyahay walaalkeen cumar.
waxa ad sheegtay xaqiiqo jirta umada maanta afka soomaliga ku hadasha dhibatooyinka haysta iyo dhibatooyinkii soo maray xukunkii dawladii islaamka ahayd ee undulus waa laba shay oo isku mida marka la eego facaailka ay ku dhaqmayan somalidu.
soomali waxay maanta degentahay ama qaybsaday shan dawladood kiiniyaati, ethopian, france, british and italian.
sidii uunbayna u kala qaybsanyihiin. inkasta oo ay sheegeen wadamada qaarkood in ay ka baxeen hadana waxay isticmalayaan nidaamo kale oo ay gacantooda ugu jirto soomaali.
waad aragtaa koonfur ama italian somalia. in maanta dawlado ku hirdamayaan iyada oo aan somali waxna lag waydoonayn. dawlado african oo aynu 100 sano ka horeysnay ayaa maanta u yeedhiya waxay rabaan.
waxa ka daran tii la iskuma hayne waxa la rabaa hadana in xaafad xaafad(satate) loo maamulo.
inaga somaliland ah ayaa xataa qaar aan caqligoodu fiicnayn la rabaa in sidaas laga yeelo 6 gobol ee is haystay. lakiin alxamdulilaah dadku way fahmayaan inta wax baratay. am ilaaahay caqli fiican siiyay.
wadanimadu waa shay qaaliya, waxan ku soo xidhayaa qolyahan furfurka raba ilaahay in uu umda soo ururiyo ugu duceeya inta urursana ka daaya qashqashka. qabiil wa qudhun ee qaranimada aynu adkayno.
ilahoow somaliland qaranimadeda adkee, soomalina dhamaan u gargaar. shantii soomaliyeed.
Reply ↓	Timacade	March 27, 2012 • 02:43	Thanks Abdillahi. In guurku uu kasoo hormaro Xajka, waa arrin aanan weligay maqal oo igu cusub iyada lafteedu. Bal Sheikh professor cumarna waan sugaynaa, hadii uu wax ku dari karo. Thanks again.
Reply ↓	A.Barkhadle	March 27, 2012 • 07:27	OO dhalinyaro .. waad salaamantahiin.. dee maanta uun baynu ugu dareynoo Irriddii islaanimadda laga galeyey baynu isweydiineynaa, kalana garan la’nahay Sunne, iyo Faradh dee shantii rukun ee islaamka siday u kala horeeyeen baynu garan la’anahay,cajiib…
hajjku waa sunne… sunnena waad karaan , salaaddu waa faradh, faradkuna waa waajub waajubkuna waa wax eebbe kugu leeyahay ..
Guurku waa diinta badhkii waana wax waajib ah…. soonku waa faradh, waana maalmo tirsan, kii safar ah, ama buka, ama xurmaddii ilmo naas jaqsiin diintuna waa yusur ee ma ahin wax kale..
Ummaddaha adduunku waxay leeyahay dhaqan, ama wadaniyad ama diin.. laakiin dadkan afka soomaliga ku hadlaa midna male.. saa waad aragtaa qolowalba dalkay joogto bay la diin tahay ,la dhaqan tahay la af tahay..kkk..taasina wa ayaan daradda ina haysata een ka soo kaban la’anahay…
Qoraagu waxuu tilmaamay halka sartu ka qudhunsan tahay isagoo waliba taariikheynayaa in wax lagu qaatobaa mudan, aad baanu ugu mahadsan yahay… Boqortooyaddii islaamka ee uu soo qaatay waxay ahayd tii abid adduunka soo marta ee ugu quwadda weynayd uguna uguna dhulweyneyd min Andulis oo ah koonfurta France, spain, buurta Taariq Binu Siyaad,iyo portu…(spain to Far east) oo ah Phillippines)…
Duminta ku dhacday dawladdii intaa oo quwad ah lahay buu inoo sheegayaa qoruhu in ay tahay xarka galay dadkii waxaan sheeganayey dhexdoodda ….
Reply ↓	Marunbaa	March 27, 2012 • 08:18	Barkhadloow dhaqan wanaag iyo xajinta diinta umada islam ka sheegataa way ku kala baxday somalidana meel baad kaga dhacday. Carabta idiga iyo qoraagaa laga warsan laakiin wadanada western ka anaka na waydii muslimiinta ku nool iyo siday kala yihiin. somali wax kaga toosan la waa marka laysku jugsiiyo. Dad aan dhaqan kooda ka xishoon, magacooda badalin, nolol ay samaystaana faral iyo sune uga weecan. Canaani way jirtaa laakiin aaqiibo somali u daa intooda badan waxoogaaga muslimiinta kale intooda badan la midka noqdayna ishaan ka lalin karnaa. canaan aan lahaanee ma liidano.
Reply ↓	Ali-Durgiye	March 27, 2012 • 09:01	akhayaartay salaan ka bacdi,
Diinta islamku maaha ray iyo afkaar ee waa qalaa allaah iyo qaala rasuul qofku marku rabo in u diinta ka hadlana waa in u soo xigtaa ayaad quran ah ama xadiis saxeex ah waana in u diinta u lahaada aqoon qota dheer dad iyo naftiisana uga faaiddeeya intaa wixii dhaafsan waa muslimiinta maanta ee rag iyo dumar culumo iyo caamo u wada guntaday in ay diinta islamka iyo sidii ay raban is waafajiyaan taasna socon mayso.
Dadkuna horta ha kala bartaan dhawr shay oo ay ka mid yihiin ;islamka iyo muslimiinta,carabta iyo diinta islamka.
Hadaad aragtaan nin soomaaliyeed oo carabta cay iyo ceeb u miise maaha warkiisu carab nacayb ee waa diin nacayb diinta iyo carabna waxba iskugma jiraan oo meesha diinta looga soo dhaco waa jiida carabta tan iyo qarnigi rasuulka(SCW) iyo asxaabtiisa.
Reply ↓	Timacade	March 27, 2012 • 09:20	barkhadle…….hadaad maraykan mar uun timaado, kelmada aad tidhi ee ah inay somalidu dhaqan guur ku jiro dib baad ula noqon. Somalida waa leaders islaamka ku dhaqankiisa iyo fidintiisa. Meel kasta oo ay joogan, waa kuwa kaliya ee ku dhiirada inay, diintooda suuban aaanay la xishoon ama cid ku ixtiraamin. Anigu magaalada aan joogo carabtu waxay leeyihiin tukaano khamriga lagu iibiyo, oo marka ay slaadu gaado ay ku dhex tukadaan. Somaliduna, xitaa tegsiilayaashoodu waxay diidaan in qof khamri sit ay lu qaadaan taxi. Carabtu sida uu Marunbaa sheegay, magaacdooda muslimka ah xitaa way bedelaan, lakiin somalidu, wayba kula yaabayaan hadaad ilmahaaga xitaa magac somali u bixiso oo aad magac carbeed u bixin weydo.
Lakiin Suaashaydoo waad ka jawaabtay , marba haduu xajku Sunne yahay.
Reply ↓	Timacade	March 27, 2012 • 09:35	Ali Durgiye…..carab Nacayb maaha diin nacayb…..dee markaa carab baan caabudaynaa weeyi xaalku. Carabtu waa 15% of the Muslim population, diinta islaamkana, inkastoy lagusoo degjiyey rasuulka oo carab ah ( SCW), maaha kuwa propogate gareeya diinta islaamka ee ugu badan. Markaa caydoodu markay run tahay, wax loo dhowro ma arkayo.
Reply ↓	A.Barkhadle.I	March 27, 2012 • 09:38	Waar heedhe aan kuu dhahno hebel , oon kuugu yeedhno hebalaw noo sheeg magacaaga…
saxiib diintu ma ahin malle Awaal iyo fikir toonaa, mana aha sida dalalkan aad joogtaan ee diintoodda kolba wadaadka ugu weyne wax ka bedello…
diinteennu islaamka ahi waxba lagama bedello, hadalkii Eebbe yirina waxba laguma darin oo waa nuusuusta quraan aanka ah, way jirtaa suuraddo suuraddo kale ka dabbo yimaadeen oo aan shaqayn hadda, kubna jirata quraanka, Hadalkii rasuulku yiri inta aan waafaqsanayn quraanka ee ahayn saxiix Bukhaari iyo muslim na waa laga tegay, laguma camal fallo … ku darsoo Anigu ma ahi sheekh wa intaan akhriyey ama aan dhegeystay culimo-ahludiin ah kaliya….\_
waxaan u soo qaatay soomalida diinteedda waxaad arkaysaa nin kule muslim baan ahay haddana kuma arkaysid isagoo tukanaya.. markaad weydiiso ma gaal baad tahay wuu kula dagaalami, mana hayo isagga iyo eebbe xadhigii ka dhexeeyey uguna fududaa, ahna halkii Eebbe weyne isku keen xidheysay, malabsanayo xumahii, waxii eebbe nahyeyeyna ku wardisanaya, aan kal soo ceyn xaaraanta iyo xalaasha, kaas baa somalida u badan ee miyaad haysa wax daliil ah oo dariiq u furayaa.. suaashu waa maya…….
dhinac dhaqanka een taabtay waa mid jirta, adna adan dafiri karin, kii ka yimd bariga fog iyo kii afrika joogey , kiicarab joogey iyo oroba joogay intuba wax mideeya miyaad haysaa oo inoo dhaqan ah, haddii aad heyso adaa sheegi..
OO nimankii ciise een lahayn diintu way ku yartahay ama ma gaadhin baad moodaa in ay meel dheer ka shubayaan.. xaalku ma laga baray baa laga badiyaaba.. sawtan la kal tegay ..
Calaw diinta waan jecel lahay carabna waan necebahay isma qabato, … oo carab rasuulkii baa ka dhashay, laakiin wuu jiraa caasi, ama se looxtuur.
Reply ↓	Ali-Durgiye	March 27, 2012 • 09:43	Timacade sidaa uma jeedo laakiin waxaan ogahay dad badan oo soomaaliyeed oo carab nacayb dardeed islam u dhaliila matalan marka laga hadli adoonsiga marka carab iyo islam yaan la isku qaldin weye warkaygu.
Geesta kale oday waraabe cadde waxba uga dhiman qurbaha dadka soomaaliyeed ee wadamada khalishga ku nool iyo anaga qurbaha ku nool aanu waxaan rumaysnahay in aan xaga diinta kagaa firfircoonahay kuwa carabta ka shaqeeya waayo tiro male intaa famili carabta ka yimid aan halka ka dhiibay een la yaabay sidaay diinta ku yihiin.
Reply ↓	Haboon	March 27, 2012 • 09:48	timacade
waxaan maqlay xadiis ka sheekeeyay naag ka mid ahayd naagaha xun xun oo sinaysan jirtay iyadoo ceel ka cabaysa ayuu ey aad u haraadsan soo ag joogsaday, eygu ceelka kama cabi karo oo wuu ku nacaya iyada markaa gacmaheega ku waraabisay eygii halkaasu iyadana ilaahay ugu danbi dhaafay ooy janada ku gashay,
marka qof danbi galay iyo qof aan danbi galinba, ilaahay qofka muslim ah ee qof ka itaal yar u naxariista isagana ilaahay ayaa u naxariista, ta sadaqadana kolba intaan bixiso in leeg ayuu ilaahay kuugu badila,
waan kugu raacsanahay in horta qof baahan wax la siiyo sida dadka macaluushu dishay ama qof xanuusanaya oo daawo loo siiyo, horta dadka xajka tagoo dhan yaa og ilaga aqbalay iyo in kale xajka dadka qaarkood faan bay ka tahay,
bal ka waran kuwan xajka tagay ee hadana madaax lagu sheego ee cadaalad xumo iyo cunsurinimada dadka ku haya ee wada tuugta ah….
Reply ↓	Ali-Durgiye	March 27, 2012 • 09:59	Waraabe cadde wuxuu yidhi;oo nimankii ciise een lahayn diintu way ku yartahay ama ma gaadhin baad mooda in ay meel dheer ka shubayaan kkkkkkkkkkk.
waraaboow dhulka soomaalida eeg halka ugu galbeedsan ama ugu waqooyisan ee ugu dhaw dhulka barakaysan ee ardul XIJAAS ama jasiiratul carab sow dhul ciisa maa halkana kuma cada qof af soomaali ku hadla oo ay diintu soo gaadho in u ciise noqon karo ?????
Reply ↓	A.Barkhadle.I	March 27, 2012 • 10:19	CALOOW ..Dhulku waa dhul ciise.. gaalkuba waa ciise ee camalkiisaa caddeeyey. miyad ka waddaa…..
Anigu waxan is laha wali qaar qaawan baa ku jira ..hadda ina cabdulle xasan waa kii laha (Danaakilana waa laga hellaa qaar la daawadee,Allahayaw dad lama caasiyee dumar xumaa)….kkk
Hadda looxay ku qoran tahay illaahay barkeeyaw wadaadkii badannaa….
Reply ↓	Ali-Durgiye	March 27, 2012 • 10:42	Waraaba caddoow waa horaan ku idhi waxa tahay, waayeel ciraduu boostahoo bixin salaadkiisu kkkkkkkkkkkkk ma wixii yara iyo dumar caybaad biloowday meesha dumar iyo faduul qabiil kuma hayn ee mawduuca ku egoow adeer.
sheegada dumar xuma ciisana ina Abdule Hassan laguma sheegin ee waxaa laga soo xigtay askar baadiyo oo ninmankaad ula baxdeen idoor ahaa oo la qoray ciidanki GENAga la odhan jiray marku mishaar iyo dhaqaala yeeshanay doonay dumar uu dhaqan xuma ku sameeyo laakiin laga diiday waana af xumadii reer Hargeysa oo wax ka soo qaad maleh laakiin aduu ha karaamo seegin.
Reply ↓	A.Barkhadle.I	March 27, 2012 • 10:49	Calooow haddalka ha leexin anigu dumar uma jeeddo hadalkee.. waa diin ahaan uun baan ka hadli sida aad u sheegtay diintu in ay dhul ciise ku soo horeysay haddanna ay ka madhan tahay.. saa waad ogtahay xeerka ciise qodobka kowaad waa
1. ciise waa wadda ciise oo nin nin caaro ma dheera…
2. nin ciise ahi hadduu dilo nin qollo kale ah in aanu ku markhaati furi karin.. oo uu been ku dhaaran …
xeerar dhaqan ee qabaailka somali waxaa u horeya in uu yahay qodobka kowaad diinta islaamka. kaliya baan iftiinshay…
Caloow .. kuma dheereeyo caydda haweenka ciise ee afka ha ii galin.. haddii aad illaahay taqaan ma Iidoor yar baa ku garafadhiya. waa sidee xaalku…..
Reply ↓	durgiye13	March 27, 2012 • 11:10	waraaba caddoow wixii aad qortay way ku hor taala ee aanu kuma leexin,hadaad leedahay hadalku uu iga dhacay ee cafwan waa raganimo.
xeerka ciise wuxuu ku qoran yahay buugag ee soo akhriso waanad dhaliilka karta waayo dee maaha kalamkii ilaahay laakiin aanu waxaan u haysta dadka qortay xeer iyo sharci ay isku maamulan mudo hada laga joogo ku dhawaad 600 sano in mudan yihiin ama lahayeen ilbaxnimo iyo xadaarad fog
Reply ↓	HaniMuufo	March 27, 2012 • 12:30	durgiye13
Iska cafi Odaygu ma xuma laakin jufo jufoda la tuujiya waa jecelyahay. Waana dhaqan ka baadiyaha laakin hada ka hor ayaan Cowke ku xanaaqay isagoo reer Djabouti si xaasidnimo iyo ulakac ah ku leh diinta ayeey ku liitaan. Isagoo jaar ila ahaa layguna waanin jiray in aan kadimada xaafadiisa aanan ku ciyaarin waayo dhalooyinka qamriga ayaa buuxi jiray. kkkkkkkkkkk Somalidu waa dad yaab leh. Waana Waraabe takarta saaran ma arkee tan kan kale saaran buu arkaa. Old culture and old mentalaty. But change has comming as soon as bosiple.
Reply ↓	A.Barkhadle.I	March 27, 2012 • 11:56	caloow diintu inta ay gadhay geeska afrika
baan ka hadlayee, taas oon tilmaamayey in ayna jirn dad qaawani meelahii diintu gaadhay, adna waadigan le anagaaba ugu horeyn diinta oo xagayagey ka soo degtey, ana wuxuun baan lahaa oo haddii ay idinku soo horeysay maxaa loo waayey waxeedii?..maxa dib idiin celiyey sidda suudan januub?
maxaa loo arki waayey sheekhul fadwa uu ciise leeyahay kaliya?..
miyaad ka haysaa hal qodob oo diin wax ka sheegayaa xeerka ciise?
gabayga wiilka darood tiriyeyna wuxuu sheegay in dadku aanu diin lahayn dhulkaa ku nooli…..
caloow maxaa top.gii aad u leexisay miyaad ku soo dabaashid halkiisii..sawtan dhalintii ka anfariirtey
Reply ↓	HaniMuufo	March 27, 2012 • 12:34	durgiye 13,
Heestan nagola raaxayso iskana hilmaam waxi dhacay. Hana didin hadii jufadaada caay diirka looga dhigo waa iska caadiyoos. Anaa walashaa ahoo jufooyinkeena shaarbaha iska dhunkadaan. Oo aay iska ambadeen qarniyo hore daaquna kala geeye big hug.
Reply ↓	durgiye13	March 27, 2012 • 13:04	waraaba caddoow,
weerar in aad ciise iyo xeerkiisa ku tahay way cadatahay laakiin suaalaad meesha keentaay markaan si hufan u dhuuxay waxaad ila eegtahay oday madaxa kildhi kula jira oon aqoon dheer lahayn.
goormay soomaali yeelatay mufti iyo shuyuukh calaami ah oo leh kutub laga daacan karo diinta islamaka?
miyaanad ogayn in geeska afrika iyo caalamka islamka dhamaantiba madaxa laga wada haysto oo ay diintooda siday raban ugu wada dhaqmi karayn?
Ma ogtahay in markii xeerka la sameeyey ay ahayd burburkii immaraadki muslimiinti reer awdal ka dib ciisana si uga badbaadu gaaliday dhulkooga qabsaday ay sameeaysteen xeer hoosaad ay ku maareeyaan noolol maalmeedkooga iyagoon diintoodina haysta oo uga siman muslimiinta kale.
waligaana mad aragtay qof ciisa ah oo haystaa diin kale oon ahayn tan islamka ee suubban?
Reply ↓	Ismoog	March 27, 2012 • 13:14	Inkastoon jecla inaan raga isku daayo hadana Durkiyow nimankani kaama taariikh iyo xadaarad hooseeyaan laakiin waanay ku faani aqoon sidaada oo kale oo waliba mar mar waabay qariyaan imika xeerkaa aad sheegtay mid u dhigma waa leeyihiin iyo hogaan guud oo meel laga wada tashan jiray,waxa kale oo jirta fartii ugu horaysay ee qornayd lana odhan jiray far gadabuursiga inay lahaayen nimankani.Inta aan ka hadlayba waa wax cadayn loo hayo iyo meelo laga milicsan karo ilaa maanta aynu joogno sida Masar.
Reply ↓	durgiye13	March 27, 2012 • 13:18	@HaniMuufoow,
abaayoo dadka soo hayaamay iyo dadka madaniga ah sida reer Muqdisho iyo reer goboleedka waxaa kala haystaa dhib weyn waanaa sababaha ay somalia u cago dhigan la,dahay.
Taa mid u dhoow ayaa naga haysata reer Boorama iyo reer hargeysaba intay meesha yar ee kulul gurguurad iyo ciisa isku egaysiis ku soo huluushan ayay hadana af xumo iyo quudhi waa nala dheex joogan laakiin maa caleesh dawlanida dul qaad noogu wacan kkkkkkkkkk
Reply ↓	A.Barkhadle.I	March 27, 2012 • 13:36	Waaryaahee… Alle qabay afkana waa yaqan waanana ka agnaane….Aan kuu sheegi muftigu waa ninka diinta la weydiiyo ee ugu cilmiga badan, sheekhuna waa uun isla isagga is katuu marka la isku yimaadoo fadwadda muftigu leeyahay..
Caloow waa kuu qurux badneyd in aad i weydiiso reer hebel intee leeyahiin ee ma habooneyn in aad tidhaa soomali ma lahayn mufti… mise kalmadda ayaa ku hoos martay?…
Calaw horaa loo yiri (Riyo haday dub leeyahiin dabadoodey ku qaran lahayeen)…
Ilbaxnimadda ciise aad ku sheegi een xasan guuleed ka horeyn adaa sheegi.. haddee gundhatahii aan la maydhi jirina halkii laga furey waad maqashay.. Caloow waasidee reer djibuuti baan ahee..kkkkk. maxaad ku tidhi nin ciise oo gaal ahi ma jiro , dee dhankeed ka timidey miyaad soo can jiidhay Djibuuti , mise waad is yeelyeelaysaa..kkkkk miyaan tiriyaa badiriyiintii uu ka mid ahaa Loraa saciid Diiriye..kkkkk..
Hadey na qabsan hadaanu ugu yeedhno miss ama mrs. ee aan idhaahdo kaliy gabareey oo ah ina muufo, mise iyadaaba muufo ah…. sawirka waan arkee ma (Fatumo LPAI) ama sida ay reer muqdishu u bixiyeen Haldhaa.. ooy ku jileysay ruwaayadii…. hal dhaa ba la i yiraahd, hiddihii baan wali. sidaa..kkkk Codkii baan maqli waayey..maxaad ka wadda ma ciisey ugu horeysay fanaana caan baxdey…
Waa runtaa oo dee badaw baan ahaa, kolkii horena reer miyi baan ahaa, hadeertona carab baan imidey oo xaal ba mogiye ….
Is bedelkan adduunku wuu iga yar maqan yahayee…midna aan kuu sheego dhulkan aan joogno Badawtinimadda waa lagu faanaa, reer yiminimadda, iyo wax qoris la’aanta.. oo dee (RA’SUULKII ) MOHAMMAD NABADGELYO IYO NAXARIISI KORKIISA HA AHAATEE.waxaa la odhan jirey (nebbigii aan waxna qoreyn waxna aan akhriyeyn.. oo ahayd amaan u gar ah….
Reply ↓	Ismoog	March 27, 2012 • 13:41	Ilma JEANpiere ama ilma saanbiyeer waa ehelkay reer jabuuti ah kiristaana ah ………….
Reply ↓	Jicimbir	March 27, 2012 • 13:44	Horay ayu u dhahay hogamiya koxeedkii Maxamed qanyare afrarx SIYASADU MAlALAHA SAXIIB WARAA WAXAY LEDAHAY DAN JOOGTA ah marka somalida waxa ku dhacday dhibato wayn oo anay dib uga soo ka banaynay waxaa soo baxay qab qablayaal waxay dhalen qab qablayaal kale tasna waxay somalida dhaxal sisay dhibta manta lagu jiro lagama yaabo in laga baxo ilahay ayan ka rajaynaynaa dadka oo nabada
Reply ↓	A.Barkhadle.I	March 27, 2012 • 13:54	smoog… miyaan kaaga baxaa ma waad ii deysid wiilka, waan yaryareynayaa..ma reer dhan baan isku tegna hal cunug oo inagu dhex jiraa… ma waxad u malayn dadkan aad tirineyso in aanan garanayn.. aaddo…
Caloow dee taariikh ma haysid ee beelaha soo hayaamey waa ciise oo gaalkii islaanka la dirirayey gacan siiyey huuno… sawtii aaan moodayey in aad taariikhda la socoto.. xilgii ciise ugu horeysay iyo siduu isticmaarku ugu wareejay dalka ( Dabbo qaawaneyd halkaad deggi is weydiiye)..
Reply ↓	A.Barkhadle.I	March 27, 2012 • 14:10	OO KII KHALIIF ahaana waxaa ka yaraadey macaamiishii soo booqan jirtey oo cabdiqani baa ka macaamiil batay. sidaa darteed wuxuu furey isna comment.. waxaanse ka Baqi in Ceebla iyo rag badan dhiig ku kici.. maxaa yeelay wuxuu taabtay Mayor Shide lacagtii uu ka ururin jiray kawaanka hilib oo ilaa maanta la la’yahay halkay ku dhici jirtey iyo mudaddii uu xilka hayey halaky martay, hantidhawrkiina wuu ka bixi la’yahay Boorame., mayorkiina meel uu jaan dhigey lama hayo ayuu leeyahay…. tiro ahaan lacagta wuxuu ku qiyaasay maalintt 347$.lacagta la soo xareeyo… Mayorkii na lama hayo buu leeyahay.. juuwanadda uu ku qaadi jireyn waa mid jeebkiisa ah oon ku jirin xisaab xidhka gobolka iyo degmaddaba.. bal la socdaa…
Reply ↓	durgiye13	March 27, 2012 • 14:31	Waraabe cadde,
waayeel ceebi ka waloon waa futo xaar celin weyday kkkkkkkkkkk waxba dabo qaawan mooye bal car hadal nuxur leh ha ku hadlo waar waxaad qaawanaan u taqanoo waa gundhatee iyo go, maro cad laga tolay oo hidde iyo dhaqan ah wuxuuna ka soo jeeda dhaqanka islamaka ee ah maalinta la joogo Maka Iyo Maddiina ee qof walo muslim ah leeyahay;labaykalaahu malabaykah lagu labisto ayaa ciise u ah labis ay ku faanan ee aduu maxaa ku labis ah?
Markaad ciisaha dhaqankiisa iyo ciyaarihiisa matalaysaan waxaad soo xidhataan gundhatee iyo go, cad sidaa ciisaha waxaanad ciyaartaan wilwile iyo saylici hadana waad caayaysaan marka soow majnuun ma tihiin hor iyo dabo midna la hayn.
Taarrikh ay Djibouti leedahay adigaa kala hadli maayo waayo gedabuursigi dhaladka ahabaa farahaan ka dharbaaxay waaba adoo gedabuursigaba dul saar ku ah kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Reply ↓	HaniMuufo	March 27, 2012 • 14:34	Ismoog,
Jufo Somaliyeed oon gaal lahayn ma jirto weliba Athiest ayeey leeyihiin fac ka fac maxaa ku jaban?.
Ma waxaad ileedahay dadku ma dooran karaan dooqooda?
Durkiye13 Haka nixin hadii lagu yiraa adeerkaa baa gaal dhalay ileeen cid dembigiisa qoodha kaa saari kartaahi ma jirtee!.
Reply ↓	Ismoog	March 27, 2012 • 14:35	Barkhad canug aa ma durkiya canug ah wale haduusan ka waynayn kaama yara anaa ku aqaan ninkaa.
Reply ↓	Ismoog	March 27, 2012 • 14:37	Hanni dadka aan sheegayo qabiilkoda ma sheegine ogow xageed igala qaadeen anagay noqon karaan waxaan kaliyoon idhi waa ehelkaye bal u fiirsada hada.
Reply ↓	HaniMuufo	March 27, 2012 • 14:42	Ismoog,
I mean gaal looma kala yareesto. How ever I know you can angry fast waan iskaa tuujin lolz kkkkkkkkk.
Madaama aad ciyaalka xaafada tahay.
Reply ↓	HaniMuufo	March 27, 2012 • 14:43	Madaama Durkiye13 yiri ciise gaal ahi ma jiro kkkkkkkkkkkk lolz durkiye how old are u?
Reply ↓	Ismoog	March 27, 2012 • 14:45	Hanni xoogaa waan kacsanay ma ogid waxa dhacay inaanan la xidhiidhi karin Timacade oo Aar Harawa na qasay…………………qofyay war ma haysid goormaa hees iigu danbaysaykkkkkkkkkkkkkk.
Reply ↓	durgiye13	March 27, 2012 • 14:57	HaniMuufo,
Gaalinimadda waxaa ugu horeeysa in qofku ku dhawaaqo oo u sheegto in u diinta islamka ka baxay qof ciisa ah oo ficilka ku kacay anigu waligay ma arag Lauren Siciidna gaal ma hayn laakiin intaan ogaa naanaysbaa lauren loogu baxshay
wiilkii u dhalay waxaa la yidhaahda ilyas Siciid waa Dr.guud ee dhartarweyn ee Djibouti waana wiil wadaad muslim wanaagsana ah.
Reply ↓	Timacade	March 27, 2012 • 15:16	@Hanni Muufo……..Seriously waxan sheegay waa run oo waxan aqaan Somali, Awoodi karta xajka oo yidhi, aan tegin wayo, waxay dhaheen lagacta inta aleeg ee aan bixinayno, waxa lanoo qaatay inaan Somalida baahidu haysto aan siino. Wayna bixiyeen qaarkood. Ilaahay siduu ka yeelayo isagaa og.
Waxa kale oo aan aqaan Somali reerahooda ay dawladu biiliso oo been sheega, oo lacagtii yaradh ee welfare ku siiyey ku tega xajka. kuwaana waa la xisaabin, ilamana ah in xaj cidi ka aqblayso, waayo dee lacagta aad xajka ku tegayso waa inaad ama adigu shaqaysataa, ama awladaada iyo ehelkaagu kuugu tabarucaan.
@Haboon….Very good example sida ay diinteenu ugu dhisantahay common sense ayna flexible u tahay. Ayad kasta oo quraanka ka mid ahi sabab bay usoo degatay, ee ayad cidla iska socota lama arag. Thank you inadeer.
@ Ismoog……Ha ka hadhin pointka ah inaan inagu ilbaxnimadeeni qarinay, Ugaaskeeni iyo afkeeniba carpet hoostii ayaan galinay, cidii kale ee wax sheegatana waxan rabnaa in tooda la qariyo.
@Barkhadle…cawa bad baad gashee alaha Sahalo
@Ali Durgiye…..Ciise, in my opinion Somali oo Dhan bay ka horeeyaan. Waana umada dhiiranaan leh waxna isku ogol dhexdooda iyo dadka ay la dhaqanyihiinba, unlike gadabursi xaasid oo dhuusada dhinaca dabaysha kaala maraaya……..kkkk Dadka waa wada ciise.
Reply ↓	durgiye13	March 27, 2012 • 15:28	Timacadde waan ku salaamay saxiib,
ciise wuxuu la mid yahay uun soomaalida kale qaar fiican oo khayr jecelna way leeyihiin dhagarqabayaalana way ka buuxaan oo aanu wada difaaci maayo laakiin odaygan waraabe waa oday dhaqan xun meel u ku soo barbaaray waan garan waayay sidaa darteed hadan marmar la taraaxaxo akhyaarta kale samaroon ha iskay cafiyaan intaan dhawri karo dareenka iyo damiirka akhyaartana waan isku day doona.
meeshana kaftan iyo dood reer magaalnimo uunbaan inta badan usoo galaa.
kaftan wanaagsan iyo mar kale insha allah.
Reply ↓	Timacade	March 27, 2012 • 16:06	This is a true story:
Gaadhi askar leedahy ah ayaan borama kasoo raacanay ilaa hargeisa. dadka badan ayaa fusshan gaadhiga oo uu ku jiro nin ciise sheegtay. Dhexda markaan socono ayuu ninkii cisse yidhi waar walaalahayow markaa hargeisa tegno, cid cisse ah hadaad taqaanaan ii sheega. gaadhiga askar baa saaran, police iyo milatery iskugu jira, dadkii gaadhiga saarnaa way wada cabsoodeen oo qof, inkastoo qaarkood yaqaanaan, dukaano oo dad ciise ah , waxay is yidhaadeen waa la idin xidhi, ileen waqtigii kacaanka ee qabyaalada la aasay bay ahayde. Ninkii, markii aan hargeisa tegnay waxuu yidhi hadaba ii tilmaama dhinac station policeka magaalada iyaga ayaan weydiin inay qof ciise ah yaqaanaan. dadkayagii gaadhiga saarnaa wan wada argagaxnay, lakiin waa loo tilmaamay. Waxa iigu war dambaysay isagoo dhinac station police ka u sii socda, waanan hubaa inuu su’aal tii uu na weydiiyey ah uu weydiinayo. waa maxay the moralof the stor, ee aanan ilaa hadda u ilaawin: markaa wax bartay ay waxan bartay in binaadmku maraan dhawr stage oo ” Moral reasoning ah” . Stage ka u hooseeya waxa la yidhaa ” obedience and punishment” stageka u sareeyana waxa la yidhaa ” Universalist stage”. Ninkaa aan la yabanayn ee ay qaakayo u haysteen inuu rer baadiye yahay moral reasoning kiisu wuu naga wada sareeyey. Waa kan labada stage ee aan ka hadlaya iyagoo sharaxan: Adiga cadee levelkii ninka ciise iyo levelka dadka kale ee gaadhiga saarnaa:
Reply ↓	HaniMuufo	March 27, 2012 • 16:14	Mahadsanid Timacade hal hadal oon waligay hilmaamin ayaa jiro bro nin reer bari ah oo gabay tirinaya ayaan ka maqlay ( Igar maqaar loo sido) ! Kuwa caydha cunaya ubadkooduna wadooyinka ku tabalaysanyihiin hadana xajka tegayaahi waa igar maqaar loo sido!. That wisper I gona holl may head atlist antil i dai even I teach may kids. Hadeey wax aanay ogoleyn lagu soo jubo waxan iraah ure adeer wuxuu yiri Igar maqaar loo sido ma ihi kkkkkkkkkkk so qosol bay la dilacaan oo afka duch ka intay ku bedesheen baay isticmalaan…
Aniga dacwaan qabaa maanta aaway jacaylkii ugubka ahaa ee kasoo iftiimay goobtan?.
Ismoog how a nomad man can blow ure up ure love history?
Arinta iyadoo halkan maraysaa iigu dambaysee maxaa qasmay malmahaan Tacsida ku maqnaa?
Reply ↓	Fariid	March 27, 2012 • 16:18	Durgiye 13, Gadabuursi ma kala laha dhalad iyo dul saar
waa wada gadabuursi Waraabe cadena waa asalkii markaa
saaxiib ha isu xaarin nin weyn ayaad tahay. anigu ciisahaaga aad sadex iyo sadex u sheegto soo dhex galimaayo.
Waraabe Cade, Ina sheekh farah iyo dabadhilifyada dabada ka wada waxa uuu hunguri ka hayaa Mayorka kursigiisa.
waxooguna waa qabyaalad qaaawan Cabdi Bile waxa uu Borama u qabtay Somali oo dhan ayaa wada og.
Khaliif adeerkii ina rayaale muxuu Borama u qabtay?
Reply ↓	A.Barkhadle.IWaraabe-cadde	March 27, 2012 • 16:26	Horta waan soo jeedaa ee ma jiifsan, waqtiguna waa igu yahay…
Caloow waad camal hadashee ma aad ceeb hadlin, midhaa xigiiney jiraan wayeel ka aad sheegi, waxuun baan fili in aanan wax badan kaa weynayn , mar ka la eego da’da maanta… dhankayga waayeelku wuu taliyaa ee waxba ma dhaafin wali , cimriguna ceeb male waa lagu faanaa…… hadalkii aan k warareegayey haddan dib ugu laabto.. oon saafo hadalka ciise diin buu leeyahay baan ku noqon … bari baa waxa jirey reerka uu yahay cali oo reer geed ah, iyo reer dudub baa kala magoobay , waxana magta sheegayney reer geeddi, waxaa la waayey cid ku cadeysa dilkaa ninka reer geedi ah, islaanka waxaa u dhexeeya oo uu ku nsamraa islaamku in qofka aan wax lagu cadeyn la dhaariyo, ciise iyo gadbuursi baa isku yimid in la dhaarsho reerkii gacanta lagu tuhmayey, markii dadkii siku yimaadeen ee loo diyaar garoobey baa wadadkii soo fadhiistey oo uu soo qaatay rixligii, markuu kitaabkii baladhiyey, buu ciise yiri dhaartii mee, saa la yiri sawkan kitaabkii dhankaaga qabo, suu yiri anagu ciisaanu nahay oo dhaar gaaar ah baanu leenahay, saa la yiri waa maxay, suu yiri waxa weeye.. afartan wiil oo gadhmadoobe ah, afartan cirroole ah, dameer dabbo la’ iyo gabadh gabadh faruuran wadadata baa la soo kaxayn, saa lagu oodi ood, markaasaa la odhan qoladdii dambiga lagu haystay , ma tii Eebbe xoolo kaa siiyo dameertaa dabadda la’ baa, dad na gabadhaa faruuran baa, saa markuu ku dhaqaaqo qofkii laga doonayey dhanka ay jirto dameertu , baa ciise orod oodda jabiyaa……dhaartiina halkaa bay ugu dhan tahay.. caloow diina waad sheegaysaa dhaqan waad sheegaysaa ciisena waa taa diintiisii iyo dhaqankiisii ee halkay isaga imanayaan islaanimo ciise iyo falalkaa aad arkayso……
caloow ciise waad ogtahay in uu ku dhaarto been, oo uu yiraahdo ciise dhaar helay miyaad xoolo uga fadhidaa ..kkkkk
Waxaan dabo socdaa anagaa ugu dhaw islaanimadda umadda geeska afrika, isaga oo is diidsiin dadkii diinta u keenay….
Caloow dhanka soo raac aad sheegtay dee ciise haddii aan u abtirino waad ogtahay oo in soo raac iyo inta ciise dhalay halkay isku jiraan……
Haddii aan u noqdo dhinac asalnimadd aad taabatay, dee anigu nin abtirsan baan ahay, adiguna ciise koley kii hole hooyaw ha goblamin yiri uun baad tahay, waad garan halkaan ku socdo. miyaan wadaa.. caloow. ma caawaan isula niman ….
midhka diinta iyo baadiriyaalka aad sheegtay ninka ad sheegi ee luarel anigu awaan aqaan wiil uu dhalay hadduu muslimay dee way jiraan gaal muslimey ubadkiisii oo waliid binu muqiirba waxuu dhalay khaalid oo islaanka heerkuu gaadhsiiyey la ogyahay oo taariikhdan ina faarax soop qorey ninkii gaadhsiiyey islaanka Spain ahaa, waliidna waa ninkii uu rasuulku waayey meel uu kaga kaadhso, markii la qabtay ee la rabay in la dilona rasuulku yiri dhabarkiisa ayuu ka soop baxi nin islaamka quweeyaa ee ha dilina….. la soco….
raali ahaada waqtigii baa igu yaroo waan safrayaa .. waa inoo mar kale…
Reply ↓	HaniMuufo	March 27, 2012 • 18:47	A. Barkhadle,
Nin yohow horta nin oday ah baa tahay laakin wax badan qaarinaya!.
Waxaan kaa codsanayaa fadlan iska daa Ciisaha aad dhaqankooda foolxumaynayso. Hadii kale aniga kaalay oo ila goosgooso Jufadayda dhaqan aad u foolxun aay leedahay ayaan kuu sheegi waana is difaaci. Dhaqankaas waa dhaqan dadka muslinka sheegtahi kaa ashareeranayaan hadana dad muslin ah ayaan nahay badankeen!.
Waliba dhaqankaas Europa xitaa ma awoodin qarnigi 19 naad in aay la soo banaan tagto aay Jufadaydu waligoodba ku fanaan oo ragu xitii kuwa ugu libaaxsani hubka isugu qaatan difaaciisa kkkkkkkkkkkkk.
Hadaan dhaqankaas kuu sheego dabeecadaadan aqaane kursigaad ka dhici. Hadana waxan ku adkaysanaynaa in aan muslin nahay diintana hade Somali oo dhan ayaa nagu amaantay in aan ahlu diin ahlu diin dhalay nahay oo xitaa aan dad amaanka jecel nahay!. Ileen dad lama xaqiree deris Abgaal baa leh! Watuu yiri S. M. C. Xasan.
Adeer nin ba wax la hulaabane malees dayaa mise waa lees rifaa?.
Reply ↓	Jama Awdali	March 27, 2012 • 19:11	Dimuqraayadii somaliland.. Somaliland guul….. way hana qaaday oo somalia ayay u socotaaa.. meesha iidoortii cabanayso kuwii kale maxaad u malayn….
Reply ↓	HaniMuufo	March 27, 2012 • 21:10	Waan ka xumahay hooyadan Somaliyeed ee barooranaysa. Hooyo Ilahaay dhibka hakaa saaro Dowlad dhalin habaabis ah yaanay Xamar ku nacsiin waa walalada dadka Xamarna. Hadaay ubadku Xamar qabtaana waa gurigoodi labaad.
Ilahoow umada Somaliyeed ka saar dhibta iyo kuwa kala qo’qobayaaba.
Reply ↓	Ali-Durgiye	March 27, 2012 • 20:09	@Dr.waraabe cilmikoogu waa garawga ay ciidha ruugan kkkkkkkkkk waligay ma arag Dr ku sheegayn warka dib jirka oo aan sal iyo raad toona lahayn beel dhan oo soomaaliyeedna af ka dhuus iyo xasarad la daba soctoo,intaad aad la soo meel martay iyo wax xunba waan soo farruuri karaa laakiin waxaa jira edeb iyo asluub iyo diin iyo iimaan iga reebaysa wixii waxashnimo iyo axmaqnimo ah oo duul lagu aflagaadeeyoo.
Midbaanse adigaa ku sheegi shalay waxaad iclaamisay dagaal lagu qaadi doono maamulka Hargeysa oo walibaa waxaa qabsatay taarrikh ku beegan bishaan maarso 29keega kii noola waan arki doona laakiin u malayn maayo in aad raad soo dhigi doonto dhulka u samarron dego fuleynimo darteed waayo shalay 1991kii waaxaad joogtay somalia ado intaa maanta ka da,yar oo dagaalami karay wax dili karay laguna dili karay laakiin taasi ma dhicin ee waxaad u oroday sida dameer dibadeedka firixi aad ku jiidha badda cas walina kumaad soo noqon dhulkaad ku dhalatay ee waxaad ka noqota Djibouti gedabuursi wixii aad u tartay waxay ku soo biyo shubatay inaad soo tira koobto wixii ay snm Boorama ka fulisay waxaad ku sheegtay in gedabuursi laga xasuuqay 3000 ila 4000 oo qof addoo waliba noola oo dhex joogay wixii aad 91 awwood u wayday ma maanta oo aad sadex lugood ku luudo ayaad soo aargoosan kartaa?
waxaa jiraa qisooyin ka dhaca dhaqanka soomaalida oo waxaa ka mid ah;marku neefka geela ah hal ama awr kuu doono ha ahaatee wuu gaboobo sidaada oo kale wuu is naca geela kalina way nacaan wuxuuna noqdaa duudkale xaasid ah oo wixii ka da,yar oo dhanba la colooba sidaa waraaba cadde wuxuuna ku hamiyaa siduu u dabar goyn lahaa geela yar yar ee soo koraaya gabal dhaca ayuu xero waydaariyaa oo u meel cidla ku habeen hooya ka dibna halka waxaa geel yar yar ku cuna habar dugaag.
Waraaba caddana warkiisu maaha gedabuursi jacayl ee wuxuu la coloobay dhalinta gedabuursi ee soo koraysaa in u halaago isna uu Riyaad ku nuugo casiirta carabta wanaa xaasid ciroobay ee ciyaal gedabuursoow is ka jira.
Reply ↓	Haboon	March 27, 2012 • 20:45	jama awdali islaanta videoga ka dhex cabanaysa iyo silanyo midkee weeyn hooyo ku teh may adeer tidhaahdo
Reply ↓	ceebla	March 27, 2012 • 20:47	dr. waraabe cade.
runtii anigu ma ihi mid difaacaysa mayor shide lakiin waxa wada difaacaya dhamaanba dhalainta gadabuursi inta qurbaha joogta iyo inta dhulkii joogta. waayo waa la ogyaay mayorkii igu da’da yaraa uguna waxqabadka badna taariikhda gadabuursi in uu yahay.
20 oday oo duqay ayaa ka horeeyay mid xataa qashin meel ka qaaday lama arag, isagna wuxuu u soo jestay in uu wax ka badalo taariikhda gadabuursi, iyaga dhalintu marka ay la kftanto dhalin kale lagu odhan jiray tuulo xataa aan lahayn hal dariiq oo laamiya ayaad ka timi ee ha ahdlin.
iyag oo ciil iyo cuqdad ka qaaday ayaa ka furay heeryadaa, maanta ay boorma la midthay magaalooyinka qayrkeed ah, lakiin duqaydii ka horeysay waxay ku qabteen lacagihii ka horeeyay ha la soo baadho isaga tiisu wy cadahee. cashurtuna waa tu awalba la bixin jiree maxaa ku soo kordhay waa waxqabadka oo intii xumayd ayaa rabta in aan la dhaqaajin wax horumara oo guna ayaa rifaysa.
lakiin waxaa ka badan inta caqliga leh ogna geesiga awdal.
khaliifna wa saxiibkaa tii gaadhay uu ogyahay in wajigii laga badalee wax uu ku hadlaa ma jiro. waanu dhaatay maalintii oo wuxu yidhi ani iyo habrcafaan ayaa isku naala. waana laga guulaystay oo tolkaa ayaa ka guulaystay. kkkk.
anyhow danta guud aynu ku tuusno, iyo horumarka somalilnd ku talaabsatay gobol ahaan waa in aynu tartanka kow ka noqonaa.
Reply ↓	Jama Awdali	March 28, 2012 • 05:36	@ Haboon kkkk waataan ka yaabay.. siilaanyo islaantan waba dhali karaa ee inay tidhaahdo bay ahayd inantaadii oo kale baan ahay aabo ama adeer… Malaha waxa lagu yidhi siilanyo da’da yar buu ka helaaye hooyo ku dhe…..
Reply ↓	A.Barkhadle.I	March 28, 2012 • 06:47	Waar hooy cali nin la hadla oo dambe ma ogi waad iga gadhsiiseen intaan maqnaaye….
Caloow kaftanku wuu furan yahay caydu se ma furna….haddii reer wax laga sheego wadar ahaan waa la baadhaa , laakiin lama qoonsado adduun dhugan warkiisa…
Dhanka diinta markaati baan kuu siin ee 1998kii , tuullo ka mid ah hayjadaha djibuuti baa macalim gadabuursi ah la geeyey, macalinku wuxuu ahaa nin aad u yaqaan diinta, caruurtana wuxuu barijirey farta faransiiska iyo cilmiga kale, tuuladda waxaa dawladu siin jirtey raashinka hayadda qaxootigu bixiso oo loogu tallo galay in loo qaybsho…..
Macalinkaa hortii kuwii ka horeeyey raashinkaa may tusi jirin dadweyhaha hayjadda, caruurna quraan ay baraan iska daaye, dugsigii dawladdu lacagta ku siin jirtey uma dhigin jirin…
ciise baadiyahii caruurtii u aflaxdey ee quraanka dareerineyso mrkuu arkay buu yiri dawladdu ha naga kaxayso macallinka, waxaa u tegay dadkii u dhawaa macallin oo yiri maxaa dhacay, say yiraahdeen, macallinkanu waa mid fiican, caruurtii quraankii wuu baray, raashin anan heli jirin buu noo keenay oo kuwii hore cuni jireen, waxbarashaddiina aad buu u baray, laakiin waxaan aragney nin oo dhankale uun wax u waddda….saa la weydiiyey dhankuu wax u waddaa, say yiraahdeen dhan yar…say yiraahdeen haddii aydaan naga kaxayn waanu dili, oo reerkaan ku wareejin dhiigiisa, waa illaahay barakeeyow wadaadkii badanna.kkkk
Haddii aad rabto macalinka wuu kula joogaa ee waan kuu sheegi calow si ad u weydiiso..kkk..
Reply ↓	Darbi Samaroon	March 28, 2012 • 17:02	Ali Wiil Ciise
Sawdigan Qastay maxaa dhacay Samaroon iyo Ciise maxay kala yihii waa labo walaalo ah oo ka dhashay Beesha Dir Waa Madoobe Dir oo Ciise ah iyo Madaluug Dir oo Samaroon ah ma labo walaalo ah ayaad isku caayaysaan Dr.Ka daa Cali xagaa diinta diinta haka marine Ciise waa walaalaheen.
Dhinaca Hidaha iyo dhaqanka waa isku mid Samaroon iyo Ciise waan dad aan lakala garan oo isku lahjad ah isku muuq iyo maqaam ah ee sideen ukala kaxaynaa….?
Reply ↓	SAHAL	March 28, 2012 • 19:37	ASC Abtiyaal, ilma abti iyo hani ….
Cali isagu salaan iguma laha caawa oo waxan ka cadhoodhay waxan uu odaygan abtigay ah ee uu garanayo uu haddaldiisa uga jawaabayo? caloow ma marsiiyo kale oo aad reer abtigay ku caydo ayaad wayday?
Tani inama kala qabatee waa inoo geedkii
Reply ↓	hiildan	March 28, 2012 • 19:48	Soo dhawoow Sahal nabad iyo caano ayaan kuu rajaynayaa in badan isma maqal. Cali wuu sa’aye bal geedkii gee
Reply ↓	SAHAL	March 28, 2012 • 20:33	Hiildan adigana sidaas iyo si ka wacan ayaan kuu rajaynayaa.
Kolay inigama wada maqnayn marar badan dusha ayaan inigala socday kolba meel aan joogaba.
Ha ka yaabin cali in uu xagaa Gudabuursiga iga maro in aan u fasaxo. Kow horta af Gadabuursi wax lagu fahansiiyo ninkani ma yaqaano ee meelba iska soo galaan. Gadabuursigaba go’ ayga uun buu ka doon doonaa kkkkkkkkkkkkk calashaan hurgufaa
Gadabuursigana iyaa ba iga Gadabuursiyaysan kkk ileen anaaba la hubaa in aan calool Gadabuursi ka soo baxee
Waar caliyoow xadhig soo qaado
Reply ↓	hiildan	March 28, 2012 • 20:50	Sahal kkkkkkkkkkkk, caliyoow xadhiga soo qaado